Fandaharanasa « Defis* »: mamatsy rano ny fambolena any Anosy sy Androy | NewsMada
Fandaharanasa « Defis* »: mamatsy rano ny fambolena any Anosy sy Androy
Manomboka hita taratra izao ny fandaharanasa « Defis » amin’ny fanondrahana tsikelikely ny velaran-tany volena any amin’ny faritra Anosy sy Androy, hiadiana amin’ny kere. Ireo karazam-boly malaky vokatra, roa na telo volana, anisan’ny vahaolana aroson’ny teknisianina.
Manomboka mahita tombontsoa ny mpanjifa sy ny mpamboly avy amin’ny fandaharanasa “Defis” any Anosy sy Androy. Ezahina ny manondraka tsikelikely ny velaran-tany volena, satria izay tsy fahampian-drano ny olana hatramin’izay. Misy ny vokatra miakatra ao anatin’ny roa volana, any amin’ny kaominina Sianamaro, Anjabarotra, distrikan’Ambovombe. Ao koa ny kaominina sasany eo an-dalana fametrahana fotodrafitrasa hahatongavan’ny rano, toy ny any Bekopiky, araka nambaran’ny mpandrindra ny tetikasa.
Misy ny fiaraha-miasa amin’ny minisitera misahana ny rano sy ny Unicef momba ny fametrahana ny toby famatsian-drano azo ampiasana amin’ny zavatra maro. Taona 2017, efa nampita tetikasa momba ny karazana fambolena ny Pam (Programme alimentaire mondial) any amin’ireo sekoly EPP sy fikambanam-behivavy ao anatin’ireo faritra ireo. Ahitan’ireo sekoly tombony izany ho an’ny fanampin-tsakafon’ny mpianatra, ary koa fidiram-bola ho an’ireo fikambanam-behivavy, misy fiantraikany amin’ny isan-tokantrano.
Tsy vitsy ireo tantsaha any an-toerana maniry ny hisian’ny tetikasa manohana ara-teknika ny fambolena, indrindra eo amin’ny famatsian-drano. Mety any an-toerana ny ankamaroan’ireo karazam-boly, ohatra, ny legioma hita ety afovoan-tany. Hevitry ny mponina maro ny hitantanan’ireny fandaharanasa mahaleotena ireny ny tetikasa. Misy ny tetikasa maharitra naroson’ny fitondrana, ady atao amin’ny kere, nefa toa tsy atokisan’ny mponina sy ny mpamatsy vola raha ny fanjakana mivantana no mitantana izany.
Defis* :Programme de développement des filières agricoles inclusives